Maxaa ka cusub dagaallada ka holcaya waqooyiga Itoobiya? | KEYDMEDIA ONLINE
Afhayeen u hadlay Dowladda Itoobiya ayaa sheegay in Shewa Robit, oo ah magaalo ay sheegteen ciidamada Tigreega todobaadkii hore, ay ka mid tahay kuwa hadda gacanta u galay ciidanka difaaca Itoobiya.
ITOOBIYA - Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay dib u qabsadeen magaalada Shewa Robit oo 220km (135 miles) u jirta caasimadda Addis Ababa, taasoo todobaadkii hore ay la wareegeen dagaalyahannada ka soo jeeda gobolka Tigray ee u diriraya Tigray People’s Liberation Front (TPLF).
Legesse Tulu, oo ku hadlay afka Xukuumadda ayaa sheegay Arbacadii, in Shewa Robit ay ka mid tahay dhowr magaalo oo ay dib ula wareegeen ciidamada Itoobiya iyo ciidamada gobolka Amxaarada, ee daacadda u ah Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed.
Tulu, wuxuu sidoo kale sheegay in galinkii dambe ee Arbacadii ay ciidamadu dib u qabsadeen, magaalada taariikhiga ah ee Lalibela iyo garoonka caalamiga ah ee Lalibela, oo ay gacanta ku hayeen dagaalyahannada Tigrayga tan iyo bishii Ogoosto ee sanadkaan.
Iska hor-imaadka ciidan ee ka socda Jahada Shewa Robit, ayaa qaatay muddo bil ka badan, kadib markii ay ciidamada Tigreegu sheegeen in ay qabsadeen magaalooyinka istiraatiijiga ah ee Dessie iyo Kombolcha, kuwaas oo dhaca marin muhiim ah oo isku xira Addis Ababa iyo Jabuuti.
Legesse Tulu, wuxuu sheegay in dowladdu ay "muddo gaaban gudaheed" dib ula wareegi doonto Dessie, xitaa iyadoo la sheegay in dagaalku uu ka socdo ugu yaraan saddex jiho.
Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa booqasho ku jooga dalka Itoobiya. Waxaa la filayaa in uu la kulmo Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Demeke Mekonnen, kaas oo la wareegay shaqada maalinlaha ah ee dowladda inta uu Abiy ku jiro goobta dagaalka.
Dalalka Shiinaha iyo Ruushka, ayaa taageero xooggan u muujiyay maamulka Abiy, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, ayaa shalay baahisay shir-jaraa’id oo uu qabtay dublamaasiga Shiinaha Wang Yi, kaas oo sheegay in Shiinuhu ka soo horjeedo faragelin kasta oo lagu sameeyo arrimaha gudaha ee Itoobiya."
Todobaadki hore ayuu hogaamiyaha kooxda TPLF Debretsion Gebremichael qoraal udiray Qaramada midoobay, kaas uu ku muujiyay in Itoobiya ay heshay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Shiinaha, iyo sidoo kale hub ka yimid Iran, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta (UAE), taaso kor u qaadday walaaca laga qabo duqaymaha ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Drones-ka ka fulinayaan Gobolka Tigray.